जब माधव नेपालले भावुक हुँदै यी नेतालाई सम्झिए… « Ok Janata Newsportal
जब माधव नेपालले भावुक हुँदै यी नेतालाई सम्झिए…
काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले लामो समय आफूसँग रहेका तर नयाँ पार्टी गठनमा साथ नदिएका दोस्रो पुस्ताबारे मुख खोलेका छन् ।
उनले धोका शब्द त प्रयोग गरेनन्, तर आफूलाई घचेटेर अगाडि बढ् भनेको, तर पछाडि फर्किएर हेर्दा कोही नपाएको बताए ।
उनले आजै पार्टी खोलौं, भोलि पार्टी खोलौं भनेका दोस्रो पुस्ताकै नेताहरुले आफूले भन्दा पहिला दुई वटा दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएको समेत खुलाए । तीनै नेताहरु अहिले एमालेमै बसेको भन्दै उनले ओली सुध्रिएका हुन् ? भनेर प्रश्न गरे ।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले २ भदौमा एमाले विभाजन गरेर नयाँ दल घोषणा गरेका थिए । तर नवौं महाधिवेशनदेखि एउटै समूहमा रहेका र संसद विघटनसँगै अध्यक्ष ओली शर्मा ओलीविरुद्ध संघर्ष गरेका १० स्थायी कमिटी सदस्य एमालेमै बसे ।
उपाध्यक्षत्रय भीम रावल, युवराज ज्ञवाली र अष्टलक्ष्मी शाक्य, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल, सचिवत्रय योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, भीम आचार्य तथा स्थायी कमिटी सदस्यहरु सुरेन्द्र पाण्डे, रघुजी पन्त र अमृतकुमार बोहरा एमालेमै बसेका हुन् । १० बुँदे कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको भन्दै दोस्रो पुस्ता अडिएपछि नेपाल समूहका केन्द्रीय सदस्य र सांसदहरु पनि एमालेमै रहे ।
केही केहीको खुट्टा काम्न थाल्यो
शनिबार पेशागत महासंघ नेपाल, वागमती प्रदेशले शनिबार गरेको जिल्लास्तरीय भेलामा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले आजै पार्टी फुटाऔं, भोलि पार्टी फुटाऔं भन्ने नेताहरुको पोजिसन परिवर्तन भएको देख्दा अचम्म लागेको बताए ।
२३ फागुन २०७७ को सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपा खारेज भएपछि आफूहरु विद्रोही आवाजका साथ एमालेमै बस्न चाहेको नेता नेपालले सुनाए । त्यसबेला आफूलाई दोस्रो पुस्ताका नेताहरुले ‘आजै पार्टी घोषणा गरौं, भोलि नै पार्टी घोषणा गरौं’ भनेर दबाब दिने गरेको नेता नेपालले सम्झिए ।
‘केपी ओली प्रतिगमनका वाहक हुन्, दक्षिणपन्थी भासमा भासिएका छन् । विदेशीसामु लम्पसार परेका छन् । त्यसैले जसरी पनि फाल्नुपर्छ ।
दोस्रो पुस्ताका नेताहरु भन्थे’ उनले भने, ‘तयार नभएका शेरबहादुर देउवालाई तयार गर्न साथीहरु जानुभएको थियो । माओवादीलाई एक ठाउँमा ल्याउन भूमिका खेल्नुभयो । उपेन्द्र यादवलाई त्यो विश्वास दिलाउनुभएको थियो ।’
आफूहरुको साथ पाउने भएपछि नै कांग्रेस, माओवादी र जसपा तयार भएको उनले बताए । नेता नेपालले आफूलाई छाडेका दोस्रो पुस्ताका नेताहरुलाई सम्झिंदै भने, ‘बलियो मोर्चा बन्न थालेपछि अगाडि बढ्नुस्, जो सुकैलाई प्रधानमन्त्री बनाए पनि हुन्छ, तर केपी शर्मा ओलीलाई फाल्नैपर्छ भनेर भन्ने उहाँहरु नै हो ।’
त्यसबेला पनि आफूले ओलीलाई फाल्न त सकिन्छ, तर संसदमा आफूहरु चाहिने भनेर सम्झाएको सुनाए । ‘संसदबाट राजीनामा दिएर निस्क्यौं भने संख्या पुग्दैन । प्रधानमन्त्रीलाई सडकबाट फाल्न सकिंदैन, संसदबाटै हटाउनुपर्छ । त्यसैले संसदको गतिविधिमा भाग नलिऔं, बहिष्कार गरौं भनें’ उनले भने ।
त्यहीअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २७ वैशाखमा विश्वासको मत लिंदा आफूहरु संसदमा अनुपस्थित भएको अध्यक्ष नेपालले बताए । फेरि प्रधानमन्त्री बनेको ओलीले सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत फेरि संसद विघटन गर्न खोजेपछि संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर जुटाउनु परेको उनले बताए ।
उनले भने, ‘त्यो बेला केहीकेहीको खुट्टा काम्न थाल्यो । हामी खुट्टा कमाउने मान्छे होइनौं । कसैको खुट्टा कामे कान्छ, म अगाडि बढें भनेर हिम्मत गरें ।’
नयाँ पार्टी गठनमा आफूलाई साथ नदिएका दोस्रो तहका नेताहरुतर्फ संकेत गर्दै उनले अघि भने, ‘मलाई घचेटेर अगाडि बढ भने, पछाडि हेर्छु त कोही पनि छैन ।’
दोस्रो पुस्ताको पोल खोले
अध्यक्ष नेपालले आफूलाई छाडेर एमालेमै बसेका दोस्रो पुस्ताका नेताहरुको पोल खोलेका छन् । उनीहरुले निर्वाचन आयोगमा दुई पार्टी दर्ता गराएको उनको दाबी छ ।
‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत, कलम चिह्न भएको पार्टी यही दोस्रो पुस्ताका नेताले खोलेका हुन्’ उनले भने, ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी लोकतान्त्रिक निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ । यो पनि दोस्रो पुस्ताकै नेताहरुले खोलेका हुन् ।’
एमालेमै बसेकाहरुलाई प्रश्न : ओली सुध्रिएका हुन् ?
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले लामो समय आफूसँग रहेका, तर अहिले एमालेमै बसेका दोस्रो पुस्ताका नेताहरुलाई प्रश्न गरेका छन्, ओली सुध्रिएका हुन् ?
हिजो आफूलाई पार्टी खोल्न दबाब दिनेदेखि आफैं अनेक दल दर्ता गर्ने नेताहरुले अहिले आफूलाई अर्को पार्टी खोल्न पाइन्छ भन्न थालेको भन्दै अध्यक्ष नेपालले भने, ‘केपी ओलीले बार्दलीबाट भुकिसकेपछि ज्ञान आएछ ज्ञान !’
आउनुस्, अध्यक्ष छाड्न तयार छु
दुई नाउमा खुट्टा टेकेर सागर तर्न नसक्ने भन्दै उनले ढुलमुलमा नबस्न नेताहरुलाई आग्रह गरे । उनले दोस्रो पुस्ताका नेताहरु एमाले छाडेर आए अध्यक्ष छाड्न तयार रहेको बताए ।
‘आउनुस्, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीको अध्यक्ष बन्नुस्’ अध्यक्ष नेपालले भने, ‘अध्यक्षबाट अहिले, केही वर्षपछि राजनीतिबाटै विदा भइहाल्छु ।’